Wɔka Israel anim; wɔtew Israel ho (1-11)
Yehowa bɛba Babilon so (12-16a)
Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ so wɔ mfaso (16b-19)
“Mumfi Babilon!” (20-22)
48 Muntie eyi, O Yakob fi,Mo a mode Israel din ato mo so+Na mufi Yuda nsu mu,*Mo a mode Yehowa din ka ntam+Na mofrɛ Israel Nyankopɔn no,Nanso ɛnyɛ nokware anaa trenee mu.+ 2 Wɔde kurow kronkron no din frɛ wɔn ho,+Na wɔde wɔn ani ato Israel Nyankopɔn no so;+Ɔno na ne din de asafo Yehowa. 3 “Tete* nneɛma no, meka kyerɛɛ wo akyɛ. Epue fii me ara m’anom,Na mema wohui.+ Mekekaa me ho prɛko pɛ na ɛbae.+ 4 Esiane sɛ minim sɛ w’aso yɛ den,Na wo kɔn yɛ dade ntini, na wo moma yɛ kɔbere+ nti, 5 Meka kyerɛɛ wo akyɛ. Ennya mmae no, mema wotee,Na amma woanka sɛ, ‘Me bosom na ɛyɛe,Me honi a wɔasen ne me dade honi* na ɛma ɛbae.’ 6 Moate na moahu eyi nyinaa. Morenka ho asɛm anaa?+ Efi nnɛ merema moate nsɛm foforo,+Nsɛm a wɔde asie a munnim ho hwee. 7 Afei na merebɔ, na emfi tete.Ɛyɛ biribi a wontee da, gye nnɛ,Sɛnea ɛbɛyɛ a worentumi nka sɛ, ‘Hwɛ! Minim dedaw.’ 8 Daabi, wontee,+ na wunnim;Tete no, na w’aso asisiw. Efisɛ minim sɛ woyɛ okontomponi paa,+Na wɔafrɛ wo mmaratofo fi awo mu.+ 9 Nanso me din nti, mɛtwentwɛn m’abufuw so;+M’ayeyi nti, mɛhyɛ me ho so wɔ wo ho,Na merenyi wo mfi hɔ.+ 10 Hwɛ! Manan wo, nanso ɛnte sɛ dwetɛ.+ Masɔ wo ahwɛ* wɔ ahoyeraw fononoo* mu.+ 11 Me din nti, me din nti na mɛyɛ.+Adɛn nti na memma wongu me ho fĩ?+ Meremfa m’anuonyam mma obiara.* 12 Tie me, O Yakob, ne Israel a mafrɛ wo. Mete sɛnea mete.+ Mene odikanfo, na me ara nso ne okyikafo.+ 13 Me ara me nsa na ɛtoo asaase fapem,+Na me nsa nifa na ɛtrɛw ɔsoro mu.+ Sɛ mefrɛ wɔn a, wɔn nyinaa sɔre gyina hɔ. 14 Mo nyinaa, mommoaboa mo ho ano, na muntie. Wɔn mu hena na ɔde eyinom ato gua? Yehowa dɔ no.+ Nea ɛsɔ n’ani na ɔde bɛyɛ Babilon,+Na ne basa bɛba Kaldeafo so.+ 15 Me ara na makasa, na mafrɛ no.+ Mede no aba, na ne kwan besi yiye.+ 16 Muntwiw mmɛn me, na muntie eyi. Efi mfiase pɛɛ menkaa biribiara wɔ ahintawee mu.+ Bere a esii no, na mewɔ hɔ.” Na afei Awurade Tumfo Yehowa asoma me, ne ne honhom.* 17 Nea Yehowa, wo Gyefo, Israel Kronkronni no,+ se ni: “Me, Yehowa, mene wo Nyankopɔn,Nea ɔkyerɛkyerɛ wo ma esi wo yiye,*+Nea ɔkyerɛ wo ɔkwan a ɛsɛ sɛ wofa so no.+ 18 Sɛ wubetie me mmara nsɛm a,+ Anka w’asomdwoe bɛyɛ sɛ asubɔnten,+Na wo trenee ayɛ sɛ po asorɔkye.+ 19 Wo nkyirimma* bɛyɛ bebree sɛ anwea,Na w’asefo ayɛ sɛ emu anwea mfuamfua.+ Wɔrentwa wɔn din nkyene, na wɔrenhyew wɔn ase mfi m’anim da.” 20 Mumfi Babilon!+ Munguan mfi Kaldeafo nkyɛn! Momfa anigye nka ho asɛm! Momfa nto gua!+ Momma ennu asaase ano baabiara.+ Monka sɛ: “Yehowa agye n’akoa Yakob.+ 21 Bere a ɔde wɔn nam anwea pradadaa so no, osukɔm anne wɔn.+ Ɔmaa nsu fii ɔbotan mu ba maa wɔn;Ɔpaee ɔbotan mu maa nsu tuei.”+ 22 “Asomdwoe nni hɔ mma abɔnefo,”+ Yehowa na waka.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “mo a mufi Yuda mu.”
^ Anaa “Mapɛɛpɛɛ wo mu.” Ebetumi nso akyerɛ, “Mapaw wo; Mayi wo.”
^ Ɛyɛ fononoo a wɔde nan dade.
^ Anaa “Me ne obiara nkyɛ m’anuonyam.”
^ Anaa “de ne honhom aka me ho.”
^ Anaa “wunya so mfaso.”